Xubin ka mid ah SD oo laga saaray Urur | Somaliska
Mid ka mid ah xubnaha ururka cunsuriga ah Sverige Demokraterna (SD) ayaa laga saaray urur matala shaqaalaha gaadiidka oo lagu magacaabo (Svenska Transportarbetareförbundet, Transport). Ninkaan SD ka mid ah oo lagu magacaabo Björn Fälth ayaa xubin ka ahaa ururkaan ka hor intii aan loo dooran in uu xisbiga SD u matalo kamuunka Vetlanda oo u dhow Jönköping. Ururka Shaqaalaha qeybtiisa kamuunka Vetlanda ayaa soo gudbisay codsiga ah in ninkaan laga ceyriyo ururka maadaama afgaartiisa ay ka hor imaaneyso shuruucda u degsan ururka. Gudiga sare ee ururka ayaa go'aamiyay in ninkaan laga ceyriyo ururka. Ma ahan markii ugu horeysay ee xubin ka mid ah SD laga saaro ururada shaqaalaha. Ururkaan ayaa ku dooday in ninkaan ay u cayriyeen ayagoo ka cabsi qaba neceybka SD ee soo galootiga uu ku faafi karo xubnaha kale ee ururka oo khaarkood ay yihiin soo galooti.
Mid ka mid ah xubnaha ururka cunsuriga ah Sverige Demokraterna (SD) ayaa laga saaray urur matala shaqaalaha gaadiidka oo lagu magacaabo (Svenska Transportarbetareförbundet, Transport). Ninkaan SD ka mid ah oo lagu magacaabo Björn Fälth ayaa xubin ka ahaa ururkaan ka hor intii aan loo dooran in uu xisbiga SD u matalo kamuunka Vetlanda oo u dhow Jönköping.
Ururka Shaqaalaha qeybtiisa kamuunka Vetlanda ayaa soo gudbisay codsiga ah in ninkaan laga ceyriyo ururka maadaama afgaartiisa ay ka hor imaaneyso shuruucda u degsan ururka. Gudiga sare ee ururka ayaa go’aamiyay in ninkaan laga ceyriyo ururka.
Ma ahan markii ugu horeysay ee xubin ka mid ah SD laga saaro ururada shaqaalaha. Ururkaan ayaa ku dooday in ninkaan ay u cayriyeen ayagoo ka cabsi qaba neceybka SD ee soo galootiga uu ku faafi karo xubnaha kale ee ururka oo khaarkood ay yihiin soo galooti.